Fuse bases mpanamboatra & mpamatsy - China Fuse bases Factory
Ny fotony dia vita amin'ny keramika avo lenta, ny resina tsy mahazaka hafanana ary ny fifandraisana static miendrika wedge amin'ny rafitra misokatra. Ny vokatra dia asongadina amin'ny filentehan'ny hafanana tsara, ny hakitroky ny mekanika avo lenta, ny fifandraisana azo itokisana ary ny fandidiana tsotra. Azo alaina ho an'ny fiangonan'i NH000-NH4 rehetra izy io.
Misy karazany roa ny firafitra ho an'ity karazana toby fiangonan'ny fuse ity; Ny iray dia namboarina niaraka tamin'ny mpitatitra fiangonan'ny rohy, Ny rohy fiorenan'ny bolting dia
napetraka ao amin'ny mpitatitra, dia ampidirina amina fifandraisana statika an'ny mpanohana / fototra. Tsy misy mpitatitra ho an'ny rafitra hafa,
izay ametrahana ny fuse bolting apetraka mivantana amin'ireo fifandraisana statika an'ny mpanohana / fototra. Ny orinasa koa dia afaka mamokatra toby tsy misy fenitra hafa amin'ny filan'ny mpanjifa.
Rehefa vita ny tranga misy tsindrona plastika miaraka amin'ny fifandraisana sy ny rohy fuse, ny fotony dia miforona amin'ny alàlan'ny welding na riveting izay samy afaka voarafitra amina dingana maro. FB15C, FB16-3J, FB19C-3J, Rt19 dia firafitra misokatra, ary ny hafa dia rafitra miorina amin'ny simiconcealed. Misy haben'ny fuse dimy azo isafidianana amin'ny fuse mitovy amin'ny RT18N, RT18B ary RT18C, misy andalana roa miditra ho an'ny RT18N. Ny iray dia
napetraka miaraka amin'ny rohy fiangonan'ny rohy mitambatra mifanaraka amin'ny habeny. Ny iray hafa dia fifandraisana misokatra maharitra miaraka amina teboka roa. Ny singa fototra rehetra dia afaka manapaka ny herinaratra. Ny toby Rt18 dia napetraka avokoa ny lalamby DIN, izay anisany ny RT18L miaraka amin'ny hidy fiarovana hiadiana amin'ny asa ratsy ao amin'ny fanjakana mamaky.